Voafafa mandrakizay - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2021-02 > Voafafa mandrakizay
Efa nisy very rakitra manan-danja teo amin'ny solosainao ve ianao? Na dia mety hampikorontan-tsaina aza izany, ny ankamaroan'ny olona zatra amin'ny solosaina dia afaka mamerina amin'ny laoniny ny rakitra toa very. Tena tsara ny mahafantatra fa tsy very daholo ny zava-drehetra rehefa manandrana mitady fampahalalana izay nofafanao tsy nahy. Na izany aza, ny fiezahana hamafa ireo zavatra mampitondra enta-mavesatra anao dia tsy mampionona. Tena tsy mahafaly ny mahafantatra fa mbola azo jerena any amin'ny toerana iray io fampahalalana io. Izany no mahatonga ny programa manokana amin'ny solosaina amin'ny tsena nomerika izay manodina ireo rakitra tsy ilaina imbetsaka ary mahatonga azy ireo tsy ho voavaky. Efa nahatsapa toy izany ve ianao tamin’ny fahotanao sy ny fahadisoanao? Moa ve misy tahotra mampahory fa tsy nofafan’Andriamanitra ny fahotanao rehetra, ary mba hotazoniny ao aorianao ny ratsy indrindra amin’ireo fahadisoanao? “Ny Tompo dia mamindra fo sy miantra, mahari-po ary be famindram-po. Tsy hifanditra mandrakizay Izy, ary tsy ho tezitra mandrakizay. Tsy manao antsika araka ny fahotantsika Izy ary tsy mamaly antsika noho ny helotsika. Fa tahaka ny haavon'ny lanitra ambonin'ny tany no ametrahany ny fahasoavany amin'izay matahotra Azy. Tahaka ny halavitry ny maraina sy ny hariva no avelany ho amintsika ny fahadisoantsika » (Salamo 103,8-12)
Tsy misy fahasamihafana lehibe kokoa noho ny andro sy ny alina, fa na eo aza ny fiantohana ny fitiavany sy ny famelany heloka dia sarotra amintsika ny mino sy matoky fa Andriamanitra dia namorona elanelana lavitra teo anelanelany sy ny fahotantsika.
Olombelona ihany no tsy hitantsika fa mora ny mamela ny hafa sy ny tenantsika ary manadino ireo tsy mety sy fanaintainana nateraka tamintsika sy ny hafa. Manana fiheverana manjavozavo isika fa ny rakitra voafafa dia mbola voatahiry ao amin'ny kapila mangirana ataon'Andriamanitra ary hisokatra amin'ny efijery isika amin'ny fotoana tsy ampoizina. Fa toy ny rakitra nomerika nanjary tsy azo novohana, dia "nanota" ny fahotantsika Andriamanitra ary namaoka azy ireo mandrakizay. Na izany aza, tsy nitaky programa lozisialy manokana io, fa iharam-pahavoazana manokana.
Mazava ho azy fa tsy nanana ordinatera ny apostoly Paoly tamin’ny androny, nefa takany fa ny fepetra takina amin’ny famelan-keloka sy ny fanadiovana ny fahotantsika dia nitaky zavatra manokana. Noheveriny fa nosoratana ny helotsika, ka tsy maintsy nofafana na nofafana. Manazava toy izao izy ao amin’ny taratasy ho an’ny Kolosiana: “Andriamanitra niara-namelona anareo tamin’ny ota sy ny nofo tsy voafora, ka efa namela ny fahotantsika rehetra. Nofoanany tamin’ny fitakiana ny trosa izay niampangany antsika ka nalainy ka napetany teo amin’ny hazo fijaliana » (Kolosiana). 2,13-14).
Tamin'ny alàlan'ny sorona nataony dia nofafan'i Jesosy ny trosan'ny trosa ary napetantsika tamin'ny hazo fijaliana ny otantsika rehetra. Tsy miafina ao anaty rakitra any an-danitra intsony ny hadisoantsika, fa voafafa indray mandeha fotsiny. Rehefa miteny Andriamanitra fa lavitra antsika ny fahotantsika toy ny hariva ny maraina dia midika izany Izy. Tsy tiany isika hisalasala ny amin'ny famelana antsika sy hiaina amin'izany tsy fahatokisana izany.
Rehefa averina amin'ny laonin'ireo manampahaizana manokana amin'ny solosaina ireo rakitrao very dia afaka misento ianao. Rehefa manome toky antsika Andriamanitra fa ny rakitra maloto rehetra amin'ny fiainantsika dia hamafa mandrakizay, dia toa tsy dia marina loatra izany. Fa izany indrindra no antony amelan'Andriamanitra antsika famelan-keloka sy fiainana mandrakizay amin'ny alàlan'i Jesosy.